အ ကြင် နာ သို့ | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
Posts Tagged "အ ကြင် နာ သို့"	12
Comments By Postစိတ်ကူးတည့်ရာ လက်တဲ့စမ်း အာတီဒုံရဲ့ ဃနာနို့ဆွမ်း - Mr. MarGa - Foreign Residentမန်းဂဇက် ကဗျာချစ်သူများ၏ ကဗျာပြခန်း (ပြခန်းအမှတ် တစ်) - Mr. MarGa - Mr. MarGaစဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၅၃ ) ( ဆော်ထည့်လိုက်စမ်းပါ ၊ ဘာသာရေး ) - kai - ကြက်အူလှည့်၎ လရှည်ကြာ ရွာထဲမှာ - TNA - Ko chogyiSakura Tower5ထပ်မှာ ဖွင့်လှစ်ထားရှိတဲ့ J-SAT အမည်၇ ဂျပန်ကုမ္ပဏီ - TNA - ကြက်အူလှည့်ဘုံဆိုင်အတွင်းမှ မှတ်သားဖွယ်ရာ - naywoon ni - Mr. MarGaဒါရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တဲ့လား? - TNA - naywoon niအတု - naywoon ni - KyawTheinသန့်ချင်ယောင်ဆောင်ထားတဲ့မြို့ကြီးတစ်မြို့ အကြောင်း - naywoon ni - အလင်း ဆက်``အဖေမေးတော့ ဖြေခဲ့တယ်´´ - ရာမည - Foreign Residentလုမ္ဗိနီ သာမော အင်ကြင်းတောသို့..... - KZ - မောင် ပေဖတ်ရွေး ရဲ့ CHANGE (Step 1.0) - မင်းမင်း - ကြက်အူလှည့်စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၅၄ ) ( ဆော်ထည့်လိုက်စမ်းပါ ၊ ဘာသာရေး - ၂ ) - KZ - ရာမညနေသာသောနေ့တစ်နေ့ ဖြစ်လိုက်ချင်သည် အပိုင်း (၁၅) - မင်းမင်း - KZအမျိုး ဘာသာ သာသနာကို စောင့်ရှောက်ကြမယ် ဆိုရင် ဖြင့် - KZ - lele kyiရွာသူ/သားများ အတွက် - KZ - မဟာရာဇာ အံစာတုံး“ရှေးရှေးက ဆင်ဖြူရှင်မနန်းမတော်မိဘုရားခေါင်ကြီးကောင်းမှူ့ အခုမှာတော့ကျောင်းအိုအို” - မဟာရာဇာ အံစာတုံး - ko pauk mandalay“သဘာဝအလွမ်းမင်းသားကြီး (ဦးကြင်ဥ)” ရှေးကဗျာများပြန်လည်ကူးယူဖ်ာထုတ်ခြင်း အမှတ် (၈) - မဟာရာဇာ အံစာတုံး - ko pauk mandalay``ရွာထဲမှာ ဆုံကြတာပေါ့´´ - cobra - ခင် ခရပ်ကွက်မှသည် နိုင်ငံဆီသို. - garuda - weiweiEast West Dental	PACE	Western Union	Category	Arts & Humanities